Xubinta Taranka Ragga dhirir ahaan tee Ugu Fiican (Halkan ka ogow) | Gaaloos.com
Home » galmada » Xubinta Taranka Ragga dhirir ahaan tee Ugu Fiican (Halkan ka ogow)
Xubinta Taranka Ragga dhirir ahaan tee Ugu Fiican (Halkan ka ogow)
Hadii laga hadlo cabir ahaan Ragga xubintooda dhadhan ahaan meesha laga dareemo waa ilaa 2 cm Oo kali ah qofki leh ee ku maraamara xubinta taranka ee dumarka qanaaco isagaa u yeeli kara balse cabirka macquulka ah maanta ka baro waaxda dareenka ka faaloota e wacdaraha.com oo kuu haysa aqoon caafimaad ahan cabirka xubinta ragga.
1)Xubinta Ragga ee caadiga ah badanaa waa Ilaa 7 Sintii Mitir calaacasha ayaa lagu cabiraa,balse waxaa Jira dadka wadamada qaar in ay gaaraan ilaa 15 (CM) Sintii Mitir – iyada Oo ragga rag dhaafka ah ama dawooyinka ku dheereeya ay gaaraan 25 CM -Sintimiitir.
2) Aw gaabow ayaa jira oo 5 Cm ah waxaa u badan ragga shiinaha iyo wadamada indha yarta ka soo jeeda wallow dumarka Cara dheerta ah aanu qancin la gaarin maadaama cabirka xubintooda balaaran yahay.
3) Waxaa Jira Xubnaha Ragga adeeg aan lahayn balse cabir ahaan 20 CM ilaa 2 CM ah kuwaasi oo dhexda ka jaba markii albaabka uu garaac is yiraahdaba taasi oo cadeen u ah in qancin iska daayee qabow bi’is galin.
Hadababa dumarka waxa ay aad u jecelyihiin Xubnaha gaagaaban balse adeega aan abid dhamaan leh sida 7 Cm iyo 15 Cm Oo la ogaaday in ay yihiin kuwa qancin ahaan gaari kara da’da qofka waynaado in ay shaqadooda gaarto.
Title: Xubinta Taranka Ragga dhirir ahaan tee Ugu Fiican (Halkan ka ogow)